Mila fanamby vaovao izao, asa vaovao… | NewsMada
Mila fanamby vaovao izao, asa vaovao…
Par Taratra sur 06/01/2020
Amin’ny tonon-taona toy izao, miraraka ompana ny fifampirarian-tsoa, ny fanamby, ny fanapahan-kevitra; eny, voadivoady aza. Eo, ohatra, ny hoe fialana amin’ny fahazaran-dratsy, fananganana itsy na iroa… Tonga hatramin’ny fampanantenana an’izatsy na izaroa. Tsy misy maha ratsy izany. Lanja miakatra ny fiainana. Natao hivoatra mandrakariva ny olombelona. Izay tsy mandroso, naman’ny mihemotra.
Amin’izany, arakaraka ny vava ve izay atao? Na atao izay lazaina, lazaina izay atao. Tsy inona fa fanajana sy fanatanterahana ny teny nomena. Eo amin’ny tena aloha; avy eo, eo amin’ny hafa nanaovana fanamby na fampanantenana. Fangaraharana amin’izay lazaina sy atao izany. Mba tsy hisy ny hoe teny tsy tsaroana; na tsy fantatra izay atao. Fahasahiana sy fijoroana fa tena hanatanteraka sy hamita…
Amin’ny ankapobeny ary matetika, saika manaitaitra mandrakariva ny fanamby na ny fampanantenana: miavaka, lehibe, mampitsiriritra… Nefa mila tanterahina sy efaina. “Trosa mila aloa ny fampanantenana”, hoy ny ohabolana arabo iray izay. Amin’izany, tsy misy asa vita indray manezaka avy hatrany na vita indray andro. Zava-dehibe ny fanombohana dieny izao fanombohan’ny taona izao, raha hanao…
Ny dingana kely isan’andro no mahalasa lavitra, ny fotoana lany isan’andro no mahatapitra ny taona amin’ny farany. Mby aiza ary inona àry no (h)atao amin’izao fiandohan’ny taona izao? Na eo amin’ny tsirairay, na isan-tokantrano, na isam-paritra… Izay no ilana ny vina sy ny tanjona mazava. Miankina amin’izay ny tetiandro, ny enti-manana, ny fomba fiasa… Andrao be famaritra na mandeha anjambany?
Mila manomboka, miroso, mitozo… Ny tonga ihany no arahabaina? Tsy misy tonga ho azy amin’izao amin’izay tian-kotratrarina, afa-tsy izay miainga, mandroso, maharitra… “Aza matahotra inona amin’izay tsy ampy fandehanana mafy fa matahora izay tsy afa-mandroso intsony”, hoy kosa ny ohabolana sinoa iray izay. Dieny izao, alao hery àry: taona vaovao mila fanamby vaovao, asa vaovao, herimpo vaovao…